Basaska u kala goosha Mandheera iyo Nairobi oo ilaalo la raacinayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya magaalada Mandheera ee ku taalla xadka Soomaaliya iyo Kenya, islamarkaana meel aan ka fogeyn Alshabaab ku dileen 28 qof ayaa sheegaya in gudoomiyaha degmadaas, Noah Mwivanda uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidan lagu dari doono basaska waaweyn ee ka bxa Mandheera, kuna sii jeeda Nairboi.
Noah Mwivanda ayaa warbaahinta u sheegay in basaska safarka ah ay raaci doonaan ciidamo ilaaliya, ilaa ay ka baxayaan deegaanada loo maleyn karo in Alshabaab weerar ka geysan karto.
Go’aankaan ayaa dowladda Kenya qaadatay kadib markii lagu eedeeyey iney dayacday amaanka dadka ku nool Mandheera iyo hareeraheeda.
Dhanka kale, wararka ka imaanaya Mandheera ayaa sheegaya in boqolaal Kenyan oo aan Soomaali aheyn lagu qanciyey iney ku sugnaadaan Mandheera, kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay megen ahaan u galay xero milateri oo ku taalla Mandheera, iyagoo ka baqayey in Alshabaab laayaan.
Xildhibaanada laga soo tooro deegaanka Mandheera ayaa ku eedeeyey xukuumadda Kenya iney wadatashi la’aan deegaanka Carabiya oo ah halka dadka lagu laayey ka rartay ciidan milateri ah oo halkaas muddo deganaa, taasina fududeysay xasuuqa Alshabaab.
Sidoo kale, xildhibaanadan ayaa sheegaya in laamaha sirdoonka iyo booliska Kenya iska dhegatireen warar dadka deegaanku soo guydbiyeen oo ay uga warbixiyeen dhaqdhaqaaqa Alshabaab ee deegaanka lagu dilay 28-ka ruux ee aan Muslimka aheyn.
Wixii ka dambeeyey sabtidii oo Alshabaab dileen dadkaas faraha badan ayaa dad boqolaal oo badankood aan Muslim ahayn waxey galeen garoon milateri oo ku yaalla Mandheera, iyagoo sheegay in ay ka cabsiqabaan in ay waxyeelo ka soo gaarto Al-Shabaab.
Daawo muuqaalo qurux badan (Maxey aheyd dhirtaani?)